“ပြည်သူတွေနိုင်ရမယ်”… – PVTV Myanmar
ကျဆုံးသွားသူတွေအတွက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှာ သွေးမအေးနိုင်ပါ
လူတွေဟာ သွေးသား နှောင်ကြိုးတွေကြားဘေးထား အနာတရတွေအား မမှုနိုင်ပါ
(ပြည်သူတွေနိုင်ရမယ် … ပြည်သူတွေနိုင်ရမယ်
ပုံဖော်မယ် သမိုင်းသစ်များရယ် ငါတို့လက်များနဲ့
အာဏာရှင်အဆုံးသတ်ရမယ်/အကြွေးဆပ်ကြမယ် ဒါ ငါတို့ရဲ့သစ္စာတရား)
Like – 10K Share – 949
Han Thu Aung says:
သီးချင်းအသာထား…. လက်နတ် ဗျူဟာနဲ စစ်အင်းအားဘဲ စကစ လုံးလုံးအုပ်ချူပ်လိုမရင်ခင် တောင့်တင်းအောင်အရင်လုပ်….
2021-06-08 at 7:10 PM
အင်အားသိန်းချီတဲ့ တပ်မတော်တခု တည်ထောင်မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်တိုင်လုပ် တလုံးထိုး သေနတ်နဲ့ကျည်ဆံ လောက်တော့
CDM လုပ်နေတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေကလူတွေက
တွင်ခုံ အသေးစားလေးတွေ နဲ့ လုပ်မယ်
မဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ မဖြစ်သေးတာ။
မြို့နယ် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ခွဲတွေကိုလည်း
Youtube က ကြည့်လုပ်ကွာလို့ ပြောမယ့်အစား
အတိုင်းအတာ အရည်အသွေး အတိအကျနဲ့
သေနတ်နဲ့ ကျည်ဆံလုပ်နည်း လက်စွဲတွေကို
2021-06-08 at 7:11 PM
2021-06-08 at 7:14 PM
အရေးတော်ပုံအေါင်ရမည် ။ 💪💪💪👍
Ayemar Aung Aung says:
2021-06-08 at 7:19 PM
Ko Myint Kyaw says:
Thein Phyo Wai says:
ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူး အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် တို့ပြည်သူတွေနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်✊✊✊💪💪💪💪
2021-06-08 at 7:41 PM
Khaine Zaw says:
2021-06-08 at 8:05 PM
2021-06-08 at 8:06 PM
ဘယ်တော့မှ သွေးမအေးဘူး အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
2021-06-08 at 8:09 PM
2021-06-08 at 8:47 PM
2021-06-08 at 8:48 PM
2021-06-08 at 9:16 PM
2021-06-09 at 4:30 AM
Kÿäw Hțíké says:
2021-06-09 at 3:07 PM